Omenala UK | Importgbọ M Mbubata
Omenala Mbubata Ọrụ UK & VAT mgbe ịbubata ụgbọ na UK
Ụgbọ ala ọ bụla a na -ebubata na UK chọrọ ka asachapụ ya site na kọstọm
N'ọtụtụ afọ nke ahụmịhe gbasara omenala UK, mbubata ụgbọ ala m abụrụla ọkachamara na mkpocha kọstọm, na -ekpochapụ ụgbọ ala site na usoro n'agbanyeghị ma ha batara n'ime ma ọ bụ na mpụga Europe ma ọ bụ ụdị njem.
Maka mbubata ọ bụla na mpụga Europe, njikwa njikwa anyị gụnyere njikwa usoro HMRC NOVA. Maka mbubata ọ bụla n'ime Europe, anyị na-enyere HMRC aka ma gwa ha mbata, iji nweta ntụaka NOVA maka DVLA.
Inwe onye ọkwọ ụgbọ ala na-ebubata usoro a n'aha gị na-eme ka a hụ na enweghị mmejọ ọ bụla na usoro ịmepụ ọdịnala dị iche iche metụtara ụgbọ ala dịgasị iche, dabere na afọ, ebe nrụpụta, ụdị ụgbọ ala, nwe na ndị ọzọ.
Ihe mgbaru ọsọ anyị kachasị mkpa bụ ime ka usoro niile nke ịbubata na ikpochapụ omenala dị mfe dị ka o kwere mee.
You na-ebubata ụgbọ gị na nzuzo?
A na-akpọkarị ihe ndị a na-ebubata n'ụgbọala maka nkeonwe dị ka 'mbubata nke onwe'. Anyị na-enyere aka na usoro ịbubata ụgbọ gị yana dịka akọwara n'elu anyị jikwaa usoro 'ikpochapu' ụgbọ gị na United Kingdom.
Mbubata nkeonwe ga -etinye ụtụ na ọrụ mgbe ị banyere UK. A naghị ele ya anya dị ka mbubata nkeonwe ma ọ bụrụ na ị na -etinye akwụkwọ maka enyemaka ụtụ isi site na atụmatụ TOR (nyefe ebe obibi).
Anyị nwere ike inye aka na ịbubata ụgbọ gị na nzuzo ma nyere aka na nkọwa nke ụtụ isi ọ bụla.
You na-ebubata ụgbọ ala gị n'ahịa?
Otu iwu a na-emetụta mbubata ugbo ala maka iji azụmaahịa belụsọ maka nọmba VAT achọrọ iji hụ na ị nwere ike ịlaghachi VAT.
Usoro maka ịkwụ ụtụ isi dịtụ iche maka ụgbọ ala azụmaahịa mana anyị nọ n'aka iji nyere gị aka na ajụjụ ọ bụla.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ka edebanye aha ya ma emesịa, anyị nwekwara ike inye aka na akụkụ nke usoro ahụ.
Na-eme atụmatụ ibubata ụgbọ gị nwa oge?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ụgbọ gị maka obere oge na United Kingdom ọ dịghị mkpa ka edebanye aha na UK kpamkpam.
N'ọtụtụ oge, ọ bụrụ na ụgbọala ahụ ga-anọ na UK naanị ọnwa isii, enwere ike ibubata ya nwa oge.
Vehiclegbọ ala gị kwesịrị mkpuchi, n'agbanyeghị.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike ịnye ya mkpuchi na mbadamba nọmba gị mana maka ụfọdụ ụgbọ, ha nwere ike ịchọ mkpuchi na VIN.
Anyị na-enye nchịkọta site na ọdụ ụgbọ mmiri mgbe nhichapụ omenaala?
N'adịghị ka ndị ọrụ ụgbọ mmiri, anyị bụ ndị na-ebubata ụgbọ ọrụ zuru oke nke pụtara na anyị ga-achịkwa usoro ahụ mgbe ụgbọ gị rutere na United Kingdom.
Ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya, ụgbọ ala gị ga -arapara n'ọdụ ụgbọ mmiri nke nwere ike ịkwụ gị ụgwọ karịa ka ọ bara. Anyị na -anakọta ụgbọ ala mgbe niile n'ọdụ ụgbọ mmiri ma mara usoro a.
Ozi ndị ọzọ maka ịnyefe ndị bi:
Ego ole ka ọ na-eri iji ụgbọ mmiri si Australia?
Mbukota gị ụgbọala?
Kedu ụdị TOR?
Kedu ihe nnyefe nke obibi UK?